Soomaaliya, 25 November 2019
Isniin 25 November 2019
Xildhibaan sheegtay in loo diiday inay ka baxdo garoonka Muqdisho
Dalays Xasan Aadan oo ka mid ah xildhibananada Soomaalida ee Aqalka Hoose ayaa ku eedaysay laamaha amniga dawladda Soomaaliya gaar ahaan nabad-sugidda NISA inay maanta ka hor istaagtay inay u safarto degaanka laga soo doorto ee Luuq.
Farmaajo oo xeer-ilaaliye cusub u magacaabay qaranka
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka ka qaaday xeer-ilaaliyihii guud ee qaranka Axmed Cali Daahir, isaga oo magacaabay mid cusub oo ah Suleymaan Maxamed Maxamuud.
Galmudug: Jadwal doorasho oo lasoo saaray
Guddiga Frasamada ee Maamul Dhisidda Dawlad Goboleedka Galmudug ayaa ku dhowaaqay jadwalka cusub ee doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedka.
ILEYSKA VOA: Beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho
Biyo ka saaris laga wado suuqa qudaarta Beledweyne
Golaha Wakiilada Somaliland oo Waqtiga loo Kordhiyay
Fadhi uu maanta magaalada Hargaeysa ku yeeshay Golaha Guurtida ee Somaliland, ayuu waqtiga muddo laba sano ah ugu kordhiyay Gollaha Wakiilada.
AMISOM oo u Gurmaneysa Beledweyne
Magaaada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa weli ka socda gurmadka loo fidinayo boqolaalka kun ee qof ee ay barakiciyeen daadadkii halkaasi saameeyey. Ambassador Francisco Madeira oo ah Madaxa Howlgalka Midowga Africa ee Somaliya ee loo soo gaabiyo AMISOM ayaa Sabtii booqday Beledweyne
Dhuusamareeb: Alshabab Dambi Lagu Helay
Maxkamad ku taalla magaalada Dhuusamareeb ayaa laba nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo inay qorsheeyeen inay weeraraan isu imaatin bishii May ee sannadkan ka dhacay magaalada Gurcieel ee Gobolka Galguduud
Somalia: Dalagyada Beeruhu Waa ay Caafimaad Qabaan
Warsaxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay dalagyada Soomaaliya kuwo caafimaad qaba oo aan soo saaristooda loo adeegsan Kiimiko sun ah
Barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qoddobo uu ka mid yahay is-afgarad dhex maray Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore ee Somalia, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud
Qoysas Ku Barakacay Roobab Ka Da'ay Jabuuti
Roob biyo dhigay dalka Jabuuti ayaa saameeyay isku-socodka, iyada oo wararka ka imanaya Jabuuti ay sheegayaan in dowladdu ay gacan ka gaystay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay roobabkan.
Doorka ay Muhaajiriinta Ku Leeyihiin Dambi-baarista Trump
Dhegaysiga marag-furka la xiriirka dambi-baarista lagu ogaanayo in madaxweynaha Maraykanka ee Donald Trump uu galay dambi sababi kara in Congressku xilka ka qaado ayaa si weyn u saameeyay wararka dalkan Maraykanka.